न्यूजलय शनिबार ०३, फागुन २०७६
३५ वर्षीया ती महिलाको नाम सोफी पार्तिक....
न्यूजलय मङ्गलबार २८, माघ २०७६
घर बाहिर निस्कनुअघि हामी सबै परफ्युमको प्रयोग गर्छौ । शरीर तथा कपडाबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्न अथवा बास्नादार बन्न अनि व्यक्तित्वलाई निखारता प्रदान गर्न परफ्युमको प्रयोग गरिन्छ । प्रायः हामी परफ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गला जस्ता शरीरका अंगमा गर्छौ । किनकी यी अंंगहरुमा लगाएको परफ्युम....
कम्प्युटर ह्याङ भयो ? यसो गर्नुहोस्
दैनिक जीवनमा विभिन्न कामका लागि कम्प्युटर प्रयोग हुन्छ । अहिले यो अत्यावश्यकजस्तै भइसकेको छ । कम्प्युटरमार्फत विश्वभरका सूचना आदन–प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, कम्प्युटरमा भाइरस लागी समस्या सिर्जना भएर दिक्क लाग्ने अवस्था निम्तिन्छ । भाइरसबाट कम्प्युटरलाई जोगाउने केही उपायहरु यस्ता छन्ः
–जथाभावी अनलाइन साइट खोल्दा....
पुरानो मोबाइल बेच्नु अघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
न्यूजलय सोमबार २७, माघ २०७६
त्यसो त पुरानो मोबाइल यत्तिकै फाल्नु भन्दा सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दा फाइदै हुन्छ । यत्तिकै फालिनु भन्दा केही पैसा भएपनि आउँछ । त्यसरी सेकेन्ड ह्यान्डमा मोबाइल बेच्न पनि सजिलो छ ।
पछिल्लो समय बनेका केही वेबसाइटहरुले एक पटक प्रयोग भएका सामान बेच्न झनै सजिलो बनाइदिएका छन्....
न्यूजलय आइतबार २६, माघ २०७६
म ड्रग्स खान्थेँ । साथीले माग्यो, मैले पनि दिएँ । तर पछि उसलाई बानी लाग्यो भने के गर्ने होला भन्ने सोँचेँ । पछि त्यही कुरा मैले मेरो साथीलाई भनेँ । उसले मैले खाएँ, तँलाई के भो भनेर मलाई सबै मिलेर कुटे । घटनापछि म रुममा....
बारम्बार रिसाउनु हुन्छ ? यस्तो समस्या होला
न्यूजलय मङ्गलबार २१, माघ २०७६
कयौँ मानिसहरुलाई के थाहा छ भने क्रोधले उनीहरुलाई समस्यामा पार्न सक्छ । तर, पनि उनीहरु रिसाउन छोड्दैनन् । झन् कोहीकोही त बारम्बार रिसाइरहेका हुन्छन् । यसले पनि उनीहरुलाई नै समस्यामा पारिरहेको हुन्छ ।
यदि कोही मान्छे बारम्बार रिसाउँछ भने उसले आफूसँग भएका कयौँ कुराहरु गुमाइरहेको....
मोजा नलगाई जुत्ता लगाउनु हुन्छ ? सावधान !
आजभोलि मोजा नलगाई जुत्ता लगाउने चलनले हामीलाई कतिको नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । विशेषगरी पुरुषहरुले त्यसरी मोजा नलगाई जुत्ता लगाएर हिँड्ने गरेका छन् फलस्वरुपः खुट्टामा संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ ।
खुट्टाको उपचार गर्ने विशेषज्ञले पनि यस्तो फेशनको विरोध गरेका छन्....
कुखुराको भन्दै कौवाको मासु बेचेपछि......
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा एक जना होटल साहुले कुखुराको मासु भनेर कागको मासु बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
तमिलनाडुको रामेश्वरमस्थित सडक किनारामा रहेका ठेला पसलहरुमा गरिएको छापामारीका क्रममा व्यापारीले चिकेन बिरयानी भन्दै कौवाको मासु हालेको बिरयानी खुवाउने गरेको फेला परेको हो ।
नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुहोस् दोष कट्छ
१. खराब सपना देखेर व्युँझियो भने फेरि सुतेपछी उक्त सपनाको असर समाप्त हुन्छ ।
नेकपाको उपाध्यक्ष बने बामदेव गौतम
न्यूजलय आइतबार १९, माघ २०७६
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा जारी रहेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । कमरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय....